Nagarik News - लेख्नु सजिलो छैन
Monday 15 Mangshir, 2077 | November 29, 2020
लेख्नु सजिलो छैन
अघिल्लो वर्ष मो यानले नोबल पुरस्कार पाएसँगै मेरो ध्यान पनि चिनियाँ साहित्यतिर तानियो। मैले चिनियाँ साहित्य अध्ययनमा खर्चें। समकालीन चिनियाँ साहित्यमा थुप्रै भिन्न मतहरू रहेछन्। मैले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सामाजिक आलोचना लेखिएका रहेछन्। हाङ शाओगोङ, यान लियान्के, वाङ शिआबो र झुजुन एबरलिनका पुस्तक मन परे। म उनीहरूका रचना अझै मेहनत गरेर पढ्ने योजनामा छु।
यो वर्षचाहिँ नेपाली साहित्यलाई। वर्षभरि पढ्न पुगोस् भनेर टन्नै पुस्तक जोहो गरेकी छु। यसका लागि काठमाडौंका पुस्तक पसल चहारेँ। कतिपय पुस्तक लेखकहरूबाट पनि प्राप्त भए। नेपाली साहित्यको समकालीन लेखन धारसँग म अपरिचित छैन। फगत पाँच वर्षयता क्यानडाको बसाइका कारण यहाँका दैनन्दिन घटनाक्रमसँग म अद्यावधिक हुन सक्दिनँ। तैपनि यहाँको समाज र लेखक जमातसँग कुनै न कुनै हिसाबले अन्तर्क्रियामै रहन्छु। यसो गर्दा म आफैंले पनि सिक्ने र सूचित हुने मौका पाइरहन्छु।
समकालीन लेखनमा अहिलेको पुस्ता निकै उर्वर भएर आएको छ। काठमाडौं आएपछि मैले हालसालै निस्केका पुस्तक किनेँ। तीमध्ये कथा, निबन्ध र कविता संग्रह धमाधम पढिरहेकी छु। उपन्यास पनि किनेँ। यहाँको दैनिकीसँग अभ्यस्त हुनु परेकाले पढ्ने फुर्सद मिलेन। उतै लगेर पढ्नेछु।
केही चर्चा गरिएका कविहरूको कविता पढ्दा मलाई उनीहरूको चर्चा भएजति शक्ति रचनामा भेटिनँ। त्यो मेरो आत्मगत आग्रहका कारणले पनि हुन सक्छ। किनभने म साहित्यमा सधैं समाज खोज्छु। मनु मन्जिललगायत थुप्रै युवाकवि केवल निजात्मक अनुभूति, अझ नितान्त व्यक्तिगत कुरा लेखिरहेका रहेछन्। यसो गर्नुमा कुनै खराबी पनि छैन। तर रचनामा सामाजिक पक्षलाई नै बढी खोतल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। मेरो चासो सिंगो समाज साहित्यमा आयो कि आएन भन्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दा श्रवण मुकारुङका कविता नै बढी मन परे।
यसपटक काठमाडौं आउँदा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि लेखकहरूको दौडधूप चलेको थाहा पाएँ। प्रज्ञा र यस्ता संस्थामा दलीय राजनीति हाबी भयो भन्ने गुनासो गर्नेहरू पनि रहेछन्। वास्तवमा यस्तो प्रवृित्त जहाँ पनि हुन्छ। फरक यति हो, अमेरिकातिर दलीय राजनीतिको ठाउँमा कुनै खास सहर, लेखकीय हालिमुहाली हुन्छ। लन्डन वा न्युयोर्कको साहित्यिक वृत्तभित्र छिर्न अरूलाई गाह्रो हुन्छ। यो प्रथा वास्तवमा गलत हो, तर रोक्न सकिँदैन।
यहाँका लेखकहरूमा विषयवस्तुलाई आधारभूतमा छुने, तर गहिराइमा नजाने प्रवृित्त पनि मैले पाएको छु। पढेकामध्ये मलाई नयनराज पाण्डे एकदमै मन पर्छन्। नारायण ढकाल, श्यामल, विमल निभा, विमला तुम्खेवा, सुलोचना मानन्धर, मोमिला सधैं मेरो रुचिभित्र पर्छन्। अमर न्यौपानेको 'पानीको घाम' पढेँ । राम्रो लाग्यो। तर, कथानकले जुन गति पाउनुपर्ने हो, त्यो बीचबीचमा नपाएजस्तो लाग्छ। अरू कृति पनि क्रमशः पढ्दैछु। नयाँ पुस्ताका महिला लेखकका कृतिको संख्या स्वात्तै घटेछ। वास्तवमा यो अनुपात बढ्दै जानुपर्थ्यो। दीपक सापकोटाले सम्पादन गरेको निर्बन्ध मोन्टाजमा जम्मा ४८ लेखक छन्, तर महिला दुईमात्रै। यो राम्रो लक्षण हुँदै होइन।
मेरा आफ्नै काम थुप्रै छन्। नयाँ पुस्तक लेख्नुपर्नेछ। ननफिक्सनमा पनि काम गर्नुछ। उपन्यास लेख्दा कल्पनाशक्ति र अध्ययन दुवै चाहिन्छ। गैरआख्यानका लागि राम्रो अनुसन्धान छ भने प्रस्तुतिमा मेहनत गरे पुगिहाल्छ। मेरो रुचि अनुवाद र सम्पादनमा पनि हो। यी सबै काम गर्नुछ।
तर त्योभन्दा पहिले त अलिकति पैसा कमाउनु पनि छ। नत्र कसरी टिक्ने लेखनमा! लेखकका लागि जीवन धान्ने लेखनमात्रै पर्याप्त छैन। अझ मैले त क्यानडा काउन्सिल अफ आर्टस, द टोरन्टो आर्टस काउन्सिलजस्ता संस्थाबाट लेख्नकै लागि अनुदानसमेत पाएँ। अहिले पनि आर्थिक रूपमा टिक्न संघर्ष नै गरिरहेकी छु।
लेखकका लागि लेखेरै हुने आयआर्जन पनि धेरै गतिलो भइसकेको छैन। प्रकाशकका दुःख पनि आफ्नै ठाउँमा होलान्। संसारभरका ठूला प्रकाशकले समेत लेखकलाई दिने भनेको त्यही सातदेखि ११ प्रतिशतसम्म हो। चल्तीका उपन्यासकार स्टेफेन किङजस्ता लेखकले आफैं पुस्तक छपाउन थालेका छन्, ताकि शतप्रतिशत रोयल्टी आफैं लिन सकियोस्। तर त्यो झन्झटिलो छ, किनकि वितरणको काम झ्याउलाग्दो हुन्छ। त्यसैले प्रकाशकसँगै लेखक निर्भर रहन्छन्। लेखकलाई अन्याय भएको अनुभूति भने हुन्छ। सारा सिर्जना गर्ने लेखकले ११ प्रतिशत रोयल्टी पाउँदा वितरकले भने ४० प्रतिशत लगिरहेको हुन्छ। उसको मेहनत त होला, तर प्रतिभा त तुलनात्मक रूपमा केही पनि परेको हुँदैन। यस्तो प्रथा छँदैछ। रोयल्टी वा आम्दानीको विषयमा अड्केर बस्ने कुरै छैन। समाज र समयप्रति लेखकको दायित्व हुन्छ।
म अहिले 'अल अफ अस इन आवर लाइभ्स' नामक उपन्यास लेखनमा क्रियाशील छु। उपन्यास त धेरै ठूलो छैन, तर मैले सोचेभन्दा बढी समय लाग्यो। यसबीच अखबार, म्यागेजिनका लागि केही लेखिनँ। धेरै सभासमारोहमा पनि उपस्थित भइनँ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिभल, शारजहाँ बुक फेयरजस्ता सीमित समारोहमा गएँ। सम्पूर्ण समय उपन्यासकै लागि खर्चिरहेकी छु।
यस्तै सिलसिलामा शारजहाँमा पोहोर सम्राट उपाध्यायसँग भेट भएको थियो। उनी मेरो दाजुका साथी पनि हुन्। पछिल्लो समय अंग्रेजी साहित्यको दुनियाँमा पाकिस्तानी लेखकहरूको प्रभाव बढ्दो छ। तीमध्ये केही त निकै गम्भीर र प्रभावशाली पनि छन्। तीमध्ये धेरै त मेरा राम्रा साथी पनि हुन्। मैले सम्राटलाई भनेँ, 'उनीहरू हिँड्दा, बस्दा सँगै हुन्छन्, तिमीलाई यस्तो गर्न मन लाग्दैन? हाम्रो पनि कुनै त्यस्तो समूह भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन?'
'आ होस्, मलाई त लाग्दैन। एक्लै काम गर्नु ठिक छ,' उनले यस्तो जवाफ दिए। लेखन एक्लै भएको बेला हुनुपर्छ। समूहमा बसेर लेख्न सकिँदैन।
म नेपालमा पछिल्लो समय आइरहेका लेखक देखेर पूरै खुसी भएकी छु। 'द भ्यानिसिङ एक्ट'का लेखक प्रवीण अधिकारी तीमध्ये एक हुन्।
गुणस्तर राम्रो आइरहेको छ। लेखनबाट आइरहेको नतिजा उत्साहजनक छ।
गुन्यु–चोली र दौरा–सुरुवाल
झरना राईको घर पाँचथरको सिदिन –१ को दवाई पानी भन्ने ठाँउमा पर्छ। तिमीहरूलाई थाहा नै छ, पाँचथर पूर्वी पहाडी जिल्ला हो। भारतको सीमासँग जोडिएको उनको गाउँ विकट छ। बिजुली बत्ती...
एक क्रोनिक दार्शनिक
हरेक वर्ष वसन्त ऋतुले पालुवा हालेपछि राजधानीका सडकभरि नीलो शिरीष फूल्छन् जसै, एक महान् स्रष्टाको सम्झना हुन्छ। ती हुन्, पारिजात। आफ्नै स्वतन्त्रताको फाँटभरि छताछुल्ल पोखिने, अप्ठ्यारो टाकुरामा पुगेर पनि आफ्नै...
टुटेको साहित्य जोड्दै
बीसको दशकमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका दुइटा अभियान–समूह निक्कै सक्रिय भए– राल्फा र लेकाली सांगीतिक समूह। राल्फालीहरू वामपन्थी धारमा रहेर क्रान्ति र विद्रोहका गीत गाउँथे, लेकाली विशुद्ध लोकजीवनका भाका र सुस्केरालाई...
किन–किन पुष्पा दिदी मलाई मन पराउनुहुन्न।उहाँ अत्यन्त भलाद्मी देखिनुहुन्छ। रूपरङ र बोली पनि मिठो छ। जब उहाँ क्याम्पस छिर्नुहुन्छ, अघिपछि दर्जन केटी देखिन थाल्छन्।– ‘पुष्पा दिदी, स्ववियुले हामीलाई कहिले पिकनिक...
माध्यमिककालीन नेपाली कविताको समय। अर्थात्, कविताको शृंगारिक युग। मोतिराम भट्टले सुरु गरेको शृंगारिक भावका कविताले सिंगो युग धाने। त्यही माध्यमिक कालको आखिरी समय विसं १९७४ मा एउटा कविता संग्रह निस्कियो–...
डाकु आयो—डाकु आयो, फुस्सा...
मलाई कुकुर मन पर्दैन । त्यसमा पनि यो छाउरो खैरे त पटक्कै मन पर्दैन। जहाँ मनलाग्यो त्यही घरिघरि सू सू र आची गर्छ। मोजा पायो कि च्यूइंगम चपाएझैं चपाएर प्वालैप्वाल...
सामान्यतः गोरखा बजार साँझ छिप्पिन नपाउँदै बन्द हुने र बिहान घाम झुल्किएपछि खुल्ने गर्छ। तर अचेल (कात्तिकदेखि फागुनसम्म) साँझ अबेर र बिहान मिर्मिरेमै चहलपहल बढ्छ। कारण हो– शैक्षिक भ्रमणको याम।
'लेख्दालेख्दै मर्न पाऊँ'
वरिपरि किताबका चाङ। बीचमा ९२ वर्षे वृद्ध काया। आँखा धमिलो भएका छन्, तर पढाइ रोकिएको छैन। हात काँप्छन्, तर केही न केही केर्न छाडेका छैनन्। लेखनीले सात दशक पार गरिसक्यो,...